Masinina router cnc hazo ATC
Masinina router cnc hazo
Tonga tao amin'ny tobin'ny mpanjifa ireo masinina ireo, ary ny valiny avy amin'ny mpanjifa, mpanamboatra milina cnc hazo ary mpanondrana
Martsa sahirana. Niverina tamin'ny ara-dalàna ny sambo fitaterana an-dranomasina, niaraka tamin'ny baiko maro dia maro, ary ny tsenan'ny milina fanaovana hazo dia nanomboka tamin'ny vanim-potoana mafana. Masinina maro ihany koa no tonga tao amin'ny ozin'ilay mpanjifa. Andao jerena ny hevitry ny mpanjifa. 13 taona cnc machi hazo izahay ...
Fitaovana vaovao R8 Auto manova ny kabinetra varavarana fanaovana milina cnc
Raha te-hamokatra varavarana hazo, lalimoara, vata ary fanaka isan-karazany ianao, azafady mba fantaro ny momba ny milina fanamboaran-trano R8 Auto Tool Change. Ity no masinina haon-kazo fanaovan-jaza maro an'isa farany teo aminay. Ity milina ity dia mampiasa fikirakirana avo lenta. Ny manasongadina azy lehibe indrindra dia ny fananany fitaovana m ...
Masinina fanaovana hazo be dia be no nalefa tamin'ny Desambra
Masinina cnc hazo 9 napetraka vita ary napetraka tao amin'ny orinasa misy anay. Nanafatra masinina cnc kitay 925 ho anay ny solontenanay, Ary nahavita sy nametraka ireo masinina ireo tao amin'ny orinasa izahay. Mpanamboatra sy mpanondrana cnc 12 taona izahay. Ny masininay dia aondrana eraky ny firenena, manana aorian'ny ...
Mahazoa fanamarihana tsara avy amin'ny mpanjifa
Mahazo tsikera tsara avy amin'ny mpanjifa Kalitao avo dia fiainan'ny orinasa, teknolojia vaovao no fototry ny orinasa, fanavaozana no lakilen'ny fandrosoan'ny orinasa, serivisy aorinan'ny varotra tsara dia hahazo tsena midadasika ho an'ny orinasa. Mandoa ny orinasa ...
Ireo mpiasa ao amin'ny ozinina dia mampiasa milina fanaovana santionany amin'ny faritra tsy hita maso
Mampiasa milina ny mpiasa ao amin'ny ozinina hanamboarana santionany amin'ny faritra tsy hita maso Ny milina fanapahana afovoany masinina dia milina manokana ampiasaina amin'ny fanapahana sy fampitaovana ireo fanaka vita amin'ny fomba manokana. Izy io dia afaka manala ny maodely fanapahana tanana ary miantehitra amin'ny asa tanana. Afaka tena ...
Ny masinina dia fonosina ary alefa
Ny masinina dia fonosina ary alefa ny toetrandro Androany tsara dia tsara, mamirapiratra ny masoandro, main-drivotra ny rivotra ary madio ny fararano. Mpanjifa maro no tonga mitsidika ny tranonkalantsika tsirairay. Ireo mpiasa ao amin'ny ozinina dia sahirana amin'ny asany manokana amin'ny toerany manokana. Hitanareo, ny mpiasa ao amin'ny t ...
Nitsidika ny lohasahan'i Tai'an Rift Valley ny orinasa
Nitsidika ny lohasahan'i Tai'an Rift Valley ny orinasa omaly, tsara ny andro, ny orinasanay dia nandeha nitety an'i Tai an ny mpiasa rehetra. Nitsidika ny zaridainan'ny labiera izahay ny maraina, izay nahafantarantsika izay nanaovana labiera sy ny fomba fanodinana azy tsikelikely. Ilay mech goavambe ...
Ny tombony azo amin'ny milina fanapahana CNC
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 20-04-24
Masinina fanapahana CNC, fantatra ihany koa amin'ny fitaovana famokarana fanaka takelaka manan-tsaina. Araka ny anarany, ny dingana rehetra manomboka amin'ny famoahana, fanapahana, fandavahana lavaka mitsivalana ary ny banga amin'ny lovia dia vita indray mandeha. Manolo tanteraka ny famokarana sy ny fanodinana azy io. Ka inona izany ...
Fahalalana fikojakojana ny milina JCUT CNC
Ny olana nentim-paharazana dia: 1. Masinina fanaovana sokitra izay tsy voatazona mihitsy: mihosin-drora ny slider guide, mihisatra ny hafainganam-pandehan'ny milina, tsy tsara ny vokatr'ilay asa, mahantra ny fiainana milina, mikatona ny axis Z, ny diagonal lesoka lehibe, ary tsy tsara ny zoro pick! Ny dr ...
R9 andian-dahatsoratra CNC milina mpamily R9 andian-dahatsoratra CNC milina mpamily: Indostria mihatra amin'ny milina: fanapahana slot dia azo ampiasaina amin'ny fanodinana fanaka karazana birao fanodinana modely fanodinana kabinetra varavarana efi-baravarana varavarana malefaka fonosana tena hazo anatiny varavarana matevina solosaina fanaka. R7 andiany CNC ...
CONSULTATION MAIMAIMPOANA +8618006360664
CONSULTATION MAIMAIMPOANA +8615863173380